I-Geobide, i-ED50 kunye ne-ETRS89 yokuLungelelanisa iNguqu yeNkqubo - iGeofumadas
I-Geobide, Ulungelelaniso lweNkqubo yoTshintsho ED50 kunye ne-ETRS89
NgoNovemba, 2011 ArcGIS-ESRI, Iiphotography, cadastre
Ukuthatha ithuba lokulandela ezinokubakho zeGeobide Suite, siza kubona ukhetho onokuluguqula phakathi Inkqubo yeZalathiso. Inomdla kwabo kufuneka baguquke phakathi kwe-Datum eyahlukileyo, kule meko siza kubona ukuba ingayenza njani na iinkqubo ze-ED50 kunye ne-ETRS89 ephantse yafana kwiLatin America phakathi kwe-NAD27 kunye ne-WGS84.
Ngaba idatha iyasuswa?
Oku akusiyo imeko yoMhlaba kaGoogle, apho kuguqulwa khona uninzi, imifanekiso emininzi ishenxisiwe, inokutshekishwa ngaphezulu phakathi kweetayile ezahlukeneyo; Nangona kunjalo, kumazwe amaninzi, amazwe okanye iindawo ezizimeleyo, amaziko oluntu anikeze iGoogleEarth ngemifanekiso echanekileyo georeference, ngesiphazamiso sokuba iGoogleEarth isebenzisa i-WGS84 njenge-generic Datum, ke ukusebenzisa idatha kwenye inkqubo kufuna inguqu. Inguqu ixhomekeke kuqala kuyo yonke ingcaciso yayo kodwa nakwindawo esikuyo. Kungenxa yoko le nto iinkqubo ezingaqhelekanga zinika iiparameter ezikhethekileyo zommandla ngamnye.
Masithathe umzekelo ngotshintsho lwe-ED50-30N (i-EPSG: 23030) ukuya kwi-ETRS89-30N (i-EPSG: i-25830) ye-Navarra, kunye neSpain. Inkcazo ejwayelekile yenguqu inenqanaba eliqinisekileyo lokuchaneka ngokuxhomekeka kwindawo esetyenziswa kuyo. Ke ngoko kukho ezinye iiparameter ezongeziweyo, ezingahambi kwinkcazo ejwayelekile kwaye kwi-Navarra umzekelo ezinye kodwa kwi-Asturias inokuba namanye amaxabiso ahlukileyo.
Ukuba sijonga umfanekiso othathwe kwi-Geomap apha ngasentla, sibona imephu eneempawu ezimbini (i-orthophoto kunye neyelenqe) zihamba kunye. Sisiphumo sokubonisa i-Navarra Cadastre kwi-ED-50N kwindiza ungqimba lweGoogleMaps kwi-WGS84 kwaye isiphumo esisiphumo sihambelana nengxaki echazwe kumhlathi odlulileyo.
Isifundo sangoku seGeobide, esivela kuyo eli nqaku ngoku sishicilela ubuncinci beendlela ze-4 zokuyilungisa ,. Nge-Geobide, ngoku kunokwenzeka ukuba ibonise ukuguqulwa kwe-diyum yotshintsho phakathi kweeNkqubo zoLungelelaniso ngeendlela ezine ezahlukeneyo:
Inguqu yohlobo oluqhelekileyo:
Olu khetho lusebenzisa inguqu yohlobo oluqhelekileyo ngaphandle kwemida yendawo, kwaye ichanekile. Kwi-Navarra, umzekelo, ukusuka kwi-ED50 ukuya kwi-ETRS89 kunempazamo ye-100-200m kwi-xe y. (Ukukhumbula ukuba oku akuchaphazeli ukulungelelanisa iinkqubo ngeedumum efanayo).
Icacile imeko ye-NAD27 ene-WGS84 eqhuba njengakwimitha ye-202 ukuya emaNtla nase-6 yeemitha ukuya empuma kumazantsi e-Central American zone, iyatshintsha njengotshintsho lwe-latitude, nangona ibalulekile kuphela kumda wamanqam kuba ivela kwi-ikhwetha ngelixa ubude abuveli mpuma yobuxoki.
Inguqu kusetyenziswa i-NTv2 grid:
Olu khetho lusebenzisa iigridi enamaxabiso ukulungisa uguquko ngokuguqulelwa komgca. Olu khetho luchanekile ngakumbi kunendlela yokuqala kwaye yamkelwe yi-IGN. Echanekileyo, kunjalo, ukuba sinokwenza igridi yendawo yethu yokusebenza.
Ukusetyenziswa kwe Geobide Ngoku banikezela ngee-grilles ezimbini ezibonelelwe yi-IGN ye-Spain, egubungela iPeninsula kunye ne-Balearic Islands, kwaye yapapashwa kwi-2003 kunye ne-2009. Umsebenzisi unokukhetha ngokulula igridi yokusebenzisa.
Kwi-Intanethi ungafumana iigridi ezininzi, nakwihlabathi liphela, kodwa ngokobukhulu azifumaneki ngokuzenzekelayo kukhuphelo lwesicelo seGeobide.
Inguqu ye-Molodensky (indlela ye-3-parameters):
Sebenzisa amaxabiso asetyenzisiweyo e-3 kwimvelaphi ephakathi kweellipsoids. Kwizicelo umncedisi woqwalaselo olwenziwe kwangaphambili ocetyiswe yi IGN eSpain
Inguqu yeBursa-Wolf (indlela ye-7-iparamitha)
Olu tshintsho lusebenzisa amaxabiso e-7 ukuguqula phakathi kwe-ellipsoids. Iiparameter eziza kungeniswa zezi: i-Offset (Dx, Dy, Dz), Ujikelezo (Rx, Ry, Rz) kunye ne-Scale factor (µ)
Kwizicelo Geobide Abancedi abahleliweyo be-3 bacetyiswe yi IGN Emantla, kuMbindi woMbindi nakwiMpuma yePeninsula, ngokulandelelana.
Njengoko ubona iziphumo azifani phakathi kweendlela zokugqibela ze-3, kodwa ngowokuqala. Yiyo loo nto kufuneka wazi ukuba utshintsho kufuneka lukhona naluphi na ukhetho oluphambili.
Phakathi kwe-ED50-xxN (i-EPSG: i-230xx) kunye ne-ETRS89-xxN (i-EPSG: i-258xx) iinkqubo ezikwindawo yeSpain kufuneka zisetyenziswe njenge-ED50 Datums / Ellipsoids kunye ne-ETRS89 / WGS84 ayilingani.
Umzekelo, ukuba le datha ephezulu ayilungiselelwe kwi-Geomap, idatha ye-Navarra kwi-ED50-30N (i-EPSG: i-23030) ekhutshwe kwindiza ngaphezulu kwedatha ebonelelwa yiGoogle Iimephu (i-Ellipsoid WGS84) iya kususwa. Ukubenza bakhangeleke kakuhle, kufuneka usebenzise ezona nguqu zichanekileyo esele zichaziwe.
Ndicinga ukuba iGeobide yenza umzamo obalulekileyo kungekuphela kokushiya amandla enkqubo yayo, kodwa ikwawubhala lo mbandela ngenkcukacha ezithe kratya kuba oko kunokuchaphazela kakhulu umgangatho kunye nokuchaneka komsebenzi, ngaphandle kokuyiqonda nayo le. Ngomnye umgudu.
Ukuza kuthi ga ngoku, yonke le nto idityaniswe ngokuzenzekelayo kwi-injini, kodwa njengoko besitshilo ngabahlobo bakaGeobide, iimfuno zabasebenzisi ziye zabakhokelela ekubeni zibonakale kwizicelo ukuze umsebenzisi ngokwakhe ayazi kwaye etshintsha notshintsho. useto olungagqibekanga, okanye ubeke enye endaweni yakho.
Inguqu ye-Ellipsoidal / geoidal urefu
Kwinguqulo entsha, i-ellipsoidal / geoidal urefu umahluko wokubala ikwatshintshiwe ukuze umsebenzisi akwazi ukukhetha imodeli ye-geoid ukuba isetyenziswe.
Iipemenclature zefayile yePRJ
Kwaye ekugqibeleni, lolunye utshintsho olubonakala lulungile kuwe ukuzama ukusebenzisana ngemigangatho ye-OGC okanye iinkqubo zenkqubo eyaziwayo. Iifayile ze-PRJ eziveliswe nguGeobide zikwindawo yokubhalwa kwe-WKT ye-OGC, ekumgangatho ovunyiweyo zixhobo ezininzi ze-CAD / GIS. Akunjalo kwizicelo ze-ESRI, ezine-PRJ, nangona zinenkcazo yemathematics efanayo, njengoko zibizwa njengezona zisemgangathweni, zibize iiNkqubo zoNxibelelaniso ngokwahlukileyo.
Kwimixholo yefayile ye-OGC PRJ, inkqubo ye-ETRS89-30N (EPSG: 25830) ichazwa ngegama lekhowudi "ETRS89 / UTM zone 30N"; usetyenziso ESRIendaweni yoko bayibiza ngokuba yi "ETRS_1989_UTM_Zone_30N". Ukuba kwi-ArcGis sidibanisa amasuntswana kunye nee-PRJ kwiindawo ezimbini ezityunjiweyo, le software iza kwenza inguqu kumhlaba nangona inkcazo yemathematika yeeNkqubo zoLungelelwaniso ifana.
Ukunikela ingqalelo koku ubulukhuni, I-Geobide inike amandla ukhetho olutsha kukhetho lwendlela yokusebenza yesalathiso ukuze umsebenzisi abonakalise ukuba ufuna iNkqubo yokuLungelelanisa kunye ne-PRJ kwisitayile okanye kwisitayile se-EPSG ESRI.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-GPS ubukhulu befowuni kunye neefowuni zomhlaba wonke
Post Next Woopra yafika ye-iPadOkulandelayo "